२५ करोड लाग्छ यी नानीलाई बचाउन ! फेसबुक लाइभमा आमाको रुवाबासी, “त्यो बच्चाको के गल्ति(भिडियो) « गोर्खाली खबर डटकम
२५ करोड लाग्छ यी नानीलाई बचाउन ! फेसबुक लाइभमा आमाको रुवाबासी, “त्यो बच्चाको के गल्ति(भिडियो)
भिडियो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, दशैंमा घर वा कोठा छाडेर गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ ? प्रहरीलाई खबर गर्न भुल्नुहोला! काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले दशैंमा घर वा कोठा छाडेर गाउँ जानेहरूलाई घरको सुरक्षामा शंका लागे प्रहरीलाई जानकारी गराएर जान आग्रह गरेका हुन् ।
प्रहरीले सुरक्षा जोखिम मानिएका क्षेत्रमा कुकुर र ड्रोनको समेत प्रयोग गर्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । यसबाहेक हरेक क्षेत्रमा आपतकालीन फोर्ससमेत रहनेछन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले हरेक प्रदेशमा डीआईजी र जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा कमान्ड फोर्ससमेत राखिएको बताए । सो फोर्सले आपतकालीन अवस्थामा प्रहरी परिचालनको अधिकार राखेको हुन्छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
२५ करोड लाग्छ यी नानीलाई ब’चाउन ! फेसबुक लाइभमा आमाको रु’वाबासी, “त्यो बच्चाको के ग’ल्ति